आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्यो लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन – Loktantra Post Loktantra Post
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्यो लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन
Published On : 13 February, 2020 4:44 pm
भद्रपुर (रासस) । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर झापाले चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा रु. एक अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलन गर्न सफल छ । कार्यालयले चालु आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को माघ महिनासम्ममा रु. एक अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
राजस्व लक्ष्य भन्दा रु. १ करोड बढी संकलन भएको छ । कार्यालयले पुराना कर नबुझाएका करदाताबाट सो अवधिमा रु. ४४ करोड उठाउन सफल भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत युवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्ममा रु. ३ अर्ब ६६ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले सात महिनाको अवधिमा आयकरतर्फ रु. ७७ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु. ८७ करोड र अन्तशुल्कतर्फबाट रु. २४ करोड राजस्व संकलन गरेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्जुङमा ८० हजार बढी व्यवसायिक करदाता रहेका छन् । समयमै मूल्य अभिबृद्धि र आम्दानी कर नबुझाएका निर्माण कम्पनी, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरेर कर बुझाउन अनुरोध गरिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले पटकपटक पत्राचार गरेका छौ’ उनले भने, ‘अब अटेर गरेमा पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गरेर उनीहरुको बैंक खाता रोक्ने र घरजग्गा लिलामी गरी असुल्ने तयारीमा छौं ।’
गत आर्थिक बर्ष २०७५ ÷०७६ मा कार्यालयले रु. दुई अर्व ६१ करोड ५६ लाख ५२ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा लिए पनि रु.दुई अर्व ६२ करोड २५ लाख २६ हजार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको थियो ।
कार्यालयले ई–हाजिरी सेवा सुरु गर्नुका साथै ‘आइपी’ क्यामेरा जडान गरी मोवायलबाट र सिसी टिभीबाट अनुगमन गर्ने गरेको प्रमुख कर अधिकृत श्रेष्ठको भनाई छ । उहाँले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी र सरलीकरण सेवा प्रवाह गर्न कार्यालयमा हेल्पडेक्स समेत राखिएको जानकारी दिए ।
कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न समयमा अबैध रुपमा भेटिएको १७ सय लिटर मदिरा र ६० बोरा सुर्ती नष्ट गरेको छ । विगत लामो समयदेखि बरामद गरिएका उक्त सामग्री कार्यालयको कक्षकोठामा स्टोर गरिएको थियो । भद्रपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा उक्त सामग्री बुधबार मात्र नष्ट गरिएको प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।